SUDAN: Shacabka oo weli diidan inuu Militariga sii xukumo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / SUDAN: Shacabka oo weli diidan inuu Militariga sii xukumo
April 16, 2019 - By: Axmed Muuse
Waxaa weli socda wadahadalada u dhaxeeya Golaha Militariga Sudan ee xilka ka tuuray Madaxweynihii Cumar Al Bashiir iyo Kooxaha rayidka ah ee ka qeyb qaatay kacdoonka shacabka dalkaasi oo ku muransan dhismaha xukuumada KMG ah.
Militariga dalkaasi ayaa sheegay inay dhisayaan xukuumad KMG ah oo u badan saraakiisha Militariga, kuwaasi oo dalka sii maamuli doona muddo labo sano ah, kadibna xilka ku wareejin doona xukuumad shibil ah, waa sida ay sheegeen.
Hase yeeshee in badan oo kamid ah shacabka dalkaasi ay rumeysan in Militariga doonayo inuu afduubo kacdoonkoodii ay xilka uga tuureen Cumar al Bashiir isla markaana doonaya in xukuumada KMG ah noqoto mid rayid ah oo la xadido awooda Militariga horey ulla soo shaqeeyey xukuumadii hore.
Guddiga ka socda ururka Bulshada Rayidka iyo Aqoonyahanada dalkaasi ayaa soo jeediyey in Xukuumada ay noqoto mid awoodleh oo ay hogaamiyaan rayidka, isla markaana loo ogolaado militariga xubno kamid ah xukuumadaasi, maamulkaasi kumeel gaarka ahna dalka kasii taliyo 2 illaa 4 sano.
Golaha Militariga Sudan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan wadahadalka iyagoo ku dooday inuu jiro khilaaf ku dhex jira ururada metala shacabka oo iyagu aan ku mideyneyn hal qorshe.
Dhinaca kale Militariga la wareegay awooda dowlada Sudan ayaa sheegay inaysan waxna iska bedali doonin isbaheysigii ay kula jireen xulafada Sacuudiga ee dagaalka ka wada dalka Yemen.
Taliska Militariga Sudan ayaa horey ciidamo kumanaan ah u diray dalka Yemen si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Xuuthiyiinta, waxayna sheegeen in ciidamadaasi ay halkaasi sii joogi doonaan.